सबैलाई राज गरेर खान्छन् हातमा यी चक्र र शंख हुने मान्छे, तपाईको कस्तो छ ? – Khabaarpati
October 18, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on सबैलाई राज गरेर खान्छन् हातमा यी चक्र र शंख हुने मान्छे, तपाईको कस्तो छ ?
काठमाडौँ । हस्तरेखा विज्ञानमा विश्वास गर्ने हो भने सबै कुरा हातले नै निर्धारण गर्छ। हस्तारेखाहरु मानव जन्मदा नै तयार भएर आएका हुन्छन्। शास्त्रका अनुसार जुन व्यक्तिको हातको औंला जौ जस्तो हुन्छ, त्यस्ता व्यक्ति निकै धनि हुन्छन् र समाजमा प्रतिष्ठित पनि बन्नेछन्।त्यस्तै हातमा शंख हुनु निकै उत्तम मानिन्छ। जुन व्यक्तिको चार ओटा औंलामा शंख चिन्ह छ, ति व्यक्तिहरु उच्च पदमा पुग्ने र राजकीय सम्मान प्राप्त गर्ने हुन्छन्।
पाँच ओटै औँलामा शंख भएका व्यक्तिहरु विदेश यात्रामा निस्कन्छन् भने ६ औँलामा शंख भएकाहरु धार्मिक र १० ओटै औंलामा शंख भएकाहरु महात्मा हुने विश्वास रहिआएको छ।त्यसैगरी, आठ ओटा औँलामा शंख भएकाहरु सुखी र धनी हुने विश्वास छ। जसको हातमा चक्र छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि भाग्यमानी मानिन्छ। दश ओटै औँलामा चक्र हुनेहरुले संसार नै जित्ने कुरा शास्त्रमा उल्लेख छ। एउटा मात्र चक्र भएको मानिस बुद्धिमान हुन्छ र दुईटा चक्र भएको मान्छे सुन्दर हुन्छ।
चौन्द्रशास्त्रका अनुसार जुन व्यक्तिको औँलामा जौ जस्तो चिन्ह हुन्छ, त्यस्ता व्यक्ति एकदम भाग्यमानी र सुखी हुने उल्लेख छ। औँलामा जौ चिन्ह हुने व्यक्ति समाजमा प्रतिष्ठित बन्ने र राजनीतिमा लागि सफल राजनीतिज्ञ हुने हस्तरेखा बिज्ञानको दाबी छ।हातमा शंखको चिन्ह हुनु निकै राम्रो मानिन्छ। यस्ता चिन्ह हुने व्यक्ति बुद्धिमानी हुने बताइन्छ। जुन व्यक्तिको चार ओटा औँलामा शंखको चिन्ह छ, त्यस्ता व्यक्तिले सरकारी उच्च पद प्राप्त गर्ने सम्भावना हुन्छ।
हातको पाँच ओटै औँलामा शंखको चिन्ह छ भने विदेशको यात्रा भैरहने हुन्छ र विदेशमा धन आर्जन पनि राम्रो हुने मानिन्छ। जुन व्यक्तिको ६ ओटा औँलामा शंख चिन्ह छ, यसले धर्मकर्ममा विश्वास हुने जनाउँछ।समुन्द्र शास्त्रमा हस्तारेखामा चक्रको बारेमा पनि चर्चा गरिएको छ। जुन व्यक्तिको दश ओटै औँलामा चक्र छ, त्यस्ता व्यक्तिले संसार जित्न सक्ने हुन्छन्।
यदि एउटा मात्र औँलामा चक्र छ भने त्यस्ता व्यक्ति विद्वान हुन्छ र दुई ओटा औँलामा चक्र छ भने सुन्दर हुने मानिन्छ। तिन ओटा औँलामा चक्र हुने व्यक्ति सुखी हुन्छन्, यस्ता व्यक्तिलाई भोक र विलास मन पर्छ।त्यसै गरि हातको चोर औँलाको फेदमा सुर्य पर्वत हुन्छ। सुर्यको सम्बन्ध राजनीतिक र सरकारी क्षेत्रसंग मानिन्छ। यदि सुर्य रेखा सफा छ भने यस्ता व्यक्ति सरकारी उच्च पदमा पुग्छन्। यसमा त्रिभुज पनि छ भने उनीहरुको प्रभाव देशमा मात्र नभएर विदेशमा समेत हुन्छ।
१) बायाँ तर्फ घुमेको शंख: जुन व्यक्ति को औँलामा बायाँ तर्फ घुमेको शंख को चिन्ह छ त्यस्ता व्यक्तिलाई विदेश यात्राको अवसर प्राप्त भइ नै रहेको हुन्छ र आफ्नो मिहिनेतको फलले समाजमा प्रतिष्ठित कमाउँछन्।२) दायाँ तर्फ घुमेको शंख: औँलामा दायाँ तर्फ घुमेको शंख हुने व्यक्तिहरुलाई भाग्यशाली, प्रतिभाशाली र धनवान भन्ने योग रहन्छ।३) मिश्रित शंख: यस्ता शंख भएको व्यक्तिहरुमा भौतिकता र लालसाको भुल उत्पन्न गराउँछ, त्यसैले मिश्रित शंख भएको व्यक्तिले जे काम पनि पैसाको लालचमा गर्ने गर्छ। उनीहरुमा बुद्धिको तिब्रता पनि कम हुन्छ।
मध्यम औंलाको टुप्पोमा दायाँ घुमेको शंख भएमा यस्ता व्यक्तिलाई धन सम्पतिको कुनै कमि हुँदैन।अनामिका औँलामा दायाँ घुमेको शंख भएमा त्यस्ता व्यक्तिको संचय धन सम्पति नष्ट हुने गर्छ।यदि कान्छी औँलाको अग्र भागमा शंख छ भने त्यस्ता व्यक्तिले आफ्नो व्यवसायबाट धेरै नै सम्पति कमाउने योग रहेको छ।
मुल्यमा धेरै गिरावट आएपछि अर्बपति साथीले किने माइकल ज्याक्सनको घर
कल गर्लहरुलाई सरकारले मासिक ८ हजार भत्ता दिने, बच्चा भएकालाई थप ५ हजार